Paradox Inowana Triumph Studios, Vagadziri veZera reZvishamiso uye Overlord | Linux Vakapindwa muropa
Paradox Interactive yazivisa kuti yawana vhidhiyo yemitambo situdiyo Triumph Studios, iyo iwe yauchazoziva nemazita akadai seZera reZvishamiso uye Overlord Munguva pfupi yapfuura, kune mamwe mafambiro anonakidza munyika yevatambi vemitambo yemavhidhiyo uye kuti mamwe acho anokanganisa kana zvisina kunangana nyika yekutamba paLinux. Ndinovimba nezvakanaka uye hapana chigumbuso izvozvi zvave kutanga kuwedzera uye makore mazhinji anga ari mumumvuri uye akakanganikwa zvachose nevagadziri ...
Chokwadi kuti vamwe vanotora zvakashata kune iyi fusion nyowani, asi ngatiedzei kuona yakanaka divi remubatanidzwa weaya ma greats maviri emutambo wevhidhiyo. Chinhu chinonakidza ndechekuti Paradox ipro Linux, saka, ikozvino zvaari muridzi weTriumph Studios, ese mazita emangwana aya anogona kupedzisira ave kuLinux, inova nhau huru kana zviri izvo pakupedzisira. Pamusoro pezvo, zvinoita sekunge mazita arikugadziridzwa kuTriumph Studios haazokanganisike nekutora uye acharamba achisimudzira.
Isu tatoona kuti Paradox yaedza sei uya nemazita ako kuLinux, uye izvozvi zvirokwazvo zvinoita saizvozvo nekodzero dzese nemazita ekuvandudza akawanikwa kubva kuma studio ariko iye zvino. Zvisinei, isu tatoona iyo Triumph Studios zita reLinux, asi kwete zvakanyanya seParadox. Ndokusaka ndichifunga kuti kufamba kwacho kunonakidza kwatiri.
Tiumph yakanyanya kutarisisa sezvaunoziva iwe mukati nzira yemavhidhiyo mitambo, uye Paradox inoda iyi mhando yemutambo wevhidhiyo zvakare, saka makambani ese ari maviri akakwana. Zvinotaridza kuti ramangwana reLinux mitambo yemavhidhiyo harina kumbotaridzika kupenya kupfuura zvazviri ikozvino, uye ndinovimba rinoramba richivandudza nhanho nhanho. Kubva kuLxA isu tinotarisira kuti iwe uenderere mberi nekuenderera mberi uye isu tichaedza kukuudza iwe zvese zvekupedzisira miniti nhau ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Paradox inowana Triumph Studios, ivo vanogadzira Zera reZvishamiso uye Overlord
ndinovimba nekuti ami ndiyo mhando yandinofarira zvakanyanya
Pop OS: iko kugoverwa kutsva kweSystem76